विप्लव र ओलीबीच गो’प्यवार्ता, ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा जाने सहमति ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारविप्लव र ओलीबीच गो’प्यवार्ता, ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा जाने सहमति !
विप्लव र ओलीबीच गो’प्यवार्ता, ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा जाने सहमति !
काठमाडौँ- सरकार र झण्डै दुई वर्षदेखि प्र’तिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच गो’प्य सहमति भएको बु’झिएको छ। सरकारसँग हालै भएको गो’प्य वार्तामा उक्त पार्टीका तर्फबाट विप्लव या उनले सु’झाएका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा जाने सहमतिसमेत भएको सरकारी उच्च स्रोतले बतायो। गत माघ २३ गते दरबारमार्गमा भएको श’क्ति प्र’दर्शनका बेला नै यो सहमति घो’षणा गर्ने तयारी ओलीले गरेको भएपनि अ’न्तिम समयमा आएर त्यो र’द्द गरिएको थियो।
सरकारले यो पार्टीलाई आ’प’रा’धिक स’मूह ठ’हर गर्दै २०७५ फागुन २८ गते प्र’तिबन्ध ल’गाउने निर्णय गरेको थियो। सरकार र यो पार्टीबीचको सहमतिमा हालै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई त्या’गी ओली सरकारमा गएका खानेपानी मन्त्री मणि थापाले स’क्रिय भूमिका खेलेको स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो,‘ विप्लवले सरकारमा आउने सहमति गरिसकेका छन्। यसमा मणिचन्द्र थापाको महत्वपूर्ण भूमिका छ।’ मन्त्री थापाले १८ दिन अघि न’ख्खु जे’लमा पुगेर यो पार्टीका नेता हे’मन्तप्रकाश वली ‘सु’दर्शन’लाई भेटेका थिए।
वलीले मन्त्री थापालाई स्वागत गरेका थिए। सु’दर्शनसँग खिचेको आफ्नो तस्बिर थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि सरकारबीच यो पार्टीको अनौपचारिक सं’वाद भइरहेको चर्चा चलेको थियो। सरकारसँग वार्ता भइसकेपछि यो पार्टीले आफू सरकारसँग वार्ता र संवादका लागि सकारात्मक रहेको वक्तव्य जा’री गरेको पाइएको हो। शनिबार जारी व’क्तव्यमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको उल्लेख छ।
शनिबार नै प्रधानमन्त्री ओली विराटनगर पुगेर विप्लव समूहसँग वार्ता सफल हुने ठो’कुवा गरेका छन् भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विप्लव स’मूहसँग वार्ता गर्न सरकार सकारात्मक भएको प्र’तिक्रिया दिएका छन्। यसबाट पनि ओली सरकार विप्लवसँग सहमति गरेर अघि ब’ढ्न खो’जेको सन्देश गएको छ। देशसंचार